ISIQALILE UKUTHUNGATHA UMQEQESHI IKAIZER CHIEFS – Isambane News
Home > Featured > ISIQALILE UKUTHUNGATHA UMQEQESHI IKAIZER CHIEFS
ISIQALILE UKUTHUNGATHA UMQEQESHI IKAIZER CHIEFS
April 26, 2018 April 26, 2018 Isambane News
Andizo Mthembu –
Njengoba iqembu leKaizer Chiefs isanda kulahlekelwa umqeqeshi walo uSteve Komphela osule isigubhukane kuleliqembu ngemuva kokuthi akhishwe kumqhudelwano we Nedbank cup iqembu le Free state stars limthela ngehlazo lamagoli amabili eqandeni.
Ikhulu zamakhosi seziveze ukuthi baphansi phezulu bafuna umqeqeshi ozocija leliqembu ngesizini ezayo ,kanti osabambe njengomqeqeshi njengamanje uPatrick Mabedi omenyezelwe njengozobamba intambo zokuqeqesha kuze kuphele isizini,osukwini lwayizolo uMabedi uhlulekile ukunqoba umdlalo wakhe wokuqala nalapho khona beshaywe iqembu le Golden Arrows ngamagoli amathathu kwelilodwa emdlalweni weligi nokuwumdlalo ububanjelwe ePrinces Magogo Stadium izolo ebsuku.
Akucaci ngomuntu ozoqashwa iChiefs kodwa ezivelayo ezithi uLuc Eymael oqeqesha iFree state stars usigaqele isikhundla sokucija iKaizer Chiefs, nokho ikhulu zamakhosi zithi zimisele ngokuthatha umqeqeshi uzofaka izinkomishi ekhabetheni njengoba kumasizini amathathu adlule akukaze kungene lutho eNaturena ngesikhathi Kuqeqesha uSteve Komphela.
Ukubhimba kwezinto ephefeni lokhu kwenze abalandeli baMakhosi ukuthi bewothe ubomvu ngomngqibelo ebusuku bengena enkundleni befuna ukushaya abadlali nomqeqeshi baphinde bacekela phansi impahla eMoses Mabhida Stadium balimaza namaKhamera akwa Sabc kanjalo nakwa Supersport.
Kanti iChiefs ayigcini kuphela ngokuthungatha umqeqeshi kodwa futhi icinga nabadlali abazothatha iqembu belibeke ezingeni eliphezulu,kanti sekunabadlali okuvela izindaba zokuthi bazoxoshwa kuleluqembu inkontileka zabo ngeke zivuselelwe,singabala uGustavo Paez osekucacile ukutho uyahamba kuleliqembu.
Abaqeqeshi kuthiwa bangena bengenile emahhovisini eKaizer Chiefs bezofaka izicelo zomsebenzi.
SUSPECTS ARRESTD FOR POSSESSION OF DRUGS
I Mamelodi Sundowns ingomphetha be-Absa Premiership 2017/2018.